Tag: fiainana manokana momba ny media sosialy | Martech Zone
Tag: fiainana manokana amin'ny media sosialy
Ny kaonty momba ny paikady ara-tsosialy ho an'ny fironana amin'ireto fironana ireto?
Alatsinainy Janoary 26, 2015 Alahady 25 Janoary 2015 Douglas Karr
Ity dia infographic hafa lehibe iray hafa avy amin'ny CJG Digital Marketing, 10 Fironana ara-tsosialy haino aman-jery sosialy hijerena ity 2015. Tena zava-dehibe ny famerenana ny paikadinao, ny paikadim-pifandraisana sy ny finday hahalalana ny toerana mety misy banga misy anao. 10 Fironana ara-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy 2015 hijerena ity taona XNUMX ny marketing amin'ny atiny dia mitohy mahazo fiaraha-monina bebe kokoa. Real Marketing Marketing amin'ny fotoana tena izy dia ho teny lehibe. Hanjakazaka amin'ny atiny sosialy ny Audio sy ny Video. Misy fiovana mitohy sy maharitra
Alahady 26 Febroary 2012 Alahady 26 Febroary 2012 Douglas Karr
Tahaka ny CAN-SPAM nanova mandrakizay ny indostrian'ny marketing mailaka, tsy maintsy ampiharina amin'ny lalàna mifehy ny haino aman-jery sosialy sy ny habaka marketing finday izahay. Na dia tsy azoko antoka aza fa ao anatin'ny toe-javatra mampalahelo ilay indostria satria ny infographic etsy ambany dia manizingizina, hiaro ilay orinasa aho satria tanora mampino tokoa ary sisintany vaovao tokoa. Ny fitaovana sy ny fampahalalana dia tsy mbola nisy toy ny ankehitriny. Mino aho fa mampiasa mpivarotra tompon'andraikitra
Alakamisy, Desambra 20, 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Avy amin'ny namana, Bob Carlson, ao amin'ny HealthX: lesona tsy manam-petra momba ny fomba ahafahan'ny consultants manova zavatra ho an'ny fikambanana. Tamin'ny herinandro lasa, nitondra namana vitsivitsy tany amin'ny trano fisakafoanana vaovao izahay, ary nahatsikaritra fa ilay mpandroso sakafo izay naka ny kaontinay dia nitondra sotro tao am-paosin'ny lobany. Toa hafahafa kely ilay izy. Rehefa nitondra ny ranonay sy ny fitaovanay ilay busboy dia nahatsikaritra aho fa nisy sotro koa tao am-paosin'ny lobany. Avy eo nijery manodidina aho nahita